कोहलीको बेंगलोरको लज्जास्पद हार ! | Hamro Khelkud
कोहलीको बेंगलोरको लज्जास्पद हार !
एजेन्सी – ओपनरद्वय डेविड वार्नर र जोनी बेयरस्टोले आक्रामक शतक र मोहम्मद नाबीले घातक बलिङ गरेपछि इन्डियन प्रिमियर लिग(आईपीएल) अन्तर्गत ११ औं खेलमा सनराइजर्स हैदराबादले रोयल च्यालेंजर्स बेंगलोरलाई १ सय १८ रनले पराजित गरेको छ ।
हैदरावादले प्रस्तुत गरेको २ सय ३२ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको बेंगलोर १९.५ ओभरमा अल आउट हुँदै १ सय १३ रनमा समेटियो । बेंंगलोरका लागि कोलिन डी ग्राण्डहोमले सर्वाधिक ३७ रन बनाउन बाहेक अन्य कुनै पनि ब्याट्सम्यानले सम्झन योग्य प्रर्दशन गर्न सकेनन् । एक समय ७.३ ओभरमै ३५–६ को कमजोर अवस्थामा पुगेको बेंगलोरलाई सातौं विकेटका लागि कोलिन डी ग्राण्डहोम र प्रयास बर्मनले ५१ रनको साझेदारी गर्दै हारको अन्तर घटाउने काम गरे । बर्मन २४ बलमा २ चौका सहित १९ रनमा आउट भए ।
उमेश यादव १४, पार्थिव पर्टेल ११, कप्तान विराट कोहली ३, शिम्रन हिटमायर ९, एबी डी विलियर्स १, मोईन अली २ र शिवम दुबे ५ रनमा पेभिलिएन फर्के । बेंगलोरलाई सस्तैमा रोक्न अफगानिस्तानका मोहम्मद नाबीले घातक बलिङ गर्दै ४ ओभरमा ११ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । सन्दीप शर्माको नाममा ३ विकेट रह्यो ।
त्यसअघि राजीव गान्धी इन्टरनेशनल स्टेडियमा टस हारेर ब्याटिङ थालेको घरेलु टोली हैदरावादले निर्धारित २० ओभरमा २ विकेटको क्षतिमा २ सय ३१ रन बनायो । यो हैदरावादले बनाएको अहिले सम्मकै उच्च स्कोर सम्म हो ।
हैदरावादलाई विशाल योगफल तयार पार्न ओपनर जोनी बेयरस्टो आफ्नो आईपीएल करियरको तेस्रो खेलमै पहिलो सानदार शतक प्रहार गर्दै १ सय १४ रनमा क्याच आउट भए । सुरुवात देखीनै मैदानमा चौका र छक्काको वर्षा गराएका बेयरस्टोले ५६ बलमा १२ चौका र ७ छक्का प्रहार गरे । बेयरस्टोले ५२ बलमा शतक पुरा गरेका थिए ।
त्यस्तै अर्का ओपनर डेविड वार्नरले पनि सानदार शतक प्रहार गरे । वार्नर १ सय रनमा अविजित रहे । २० ओभरको चौथो बलमा मोहम्मद सिराजलाई चौका हान्दै ५४ बलमा शतक प्रहार गरेका थिए । वार्नरको यो आईपीएल करियमा चौथो शतक हो ।वार्नरले ५५ बलमा समान ५ चौका र छक्का प्रहार गरे । यी दुई ओपनरले पहिलो विकेटका लागि १ सय ८५ रनको कीर्तिमानी साझेदारी गरेका थिए । पहिलो विकेटका यो आईपीएलमा अहिले सम्मकै उच्च साझेदारी समेत हो ।
यी दुईको साझेदारी १७ ओभरको दोस्रो बलमा युजवेन्द्र चाहलले बेयरस्टोलाई उमेश यादवबाट क्याच गराउँदै तोडेका थिए । विजय शंकर ९ रनमा रन आउट हुँदा युसुफ पठान ६ रनमा अविजित रहे । बेंगलोरका लागि युजवेन्द्र चाहालले १ विकेट लिन बाहेक अन्य कुनै पनि बलरले विकेट लिन सकेनन् ।
यो हैदरावादको दोस्रो जित हो । यस अघि पहिलो खेलमा हैदरावाद कोलकतासँग ६ विकेटले पराजित हुँदा राजस्थान रोयल्सलाई ५ विकेटले हराएको थियो । हैदरावादले आफ्नो चौथो खेल आगमी अप्रिल ४ मा दिल्ली क्यापिटल्ससँग खेल्ने छ ।
यो बेंगलोरको लगातार तेस्रो हार हो । यस अघि बेंगलोर चेन्नईसँग ६ विकेट र मुम्बई इन्डियन्ससँग ६ रनले पराजित भएको थियो । बंगलोरले आफ्नो चौथो खेल आगमी २ अप्रिलमा राजस्थान रोयल्ससँग खेल्ने छ ।